Ny fomba hihazonana ny ny Garden Tools amin'ny endrika Lehibe - China Richina
Ny fomba hihazonana ny ny Garden Tools amin'ny endrika Lehibe
Ny fitiavana ny jaridainany? Miaraka zaridaina dia malaza andro izany, dia misy tsy maro ny tokotany izay tsy manan-damba iray, fara fahakeliny, vilany, na fitoeran-javatra amin'ny zavatra maniry ao anatiny. Fa tena mety, ianao mandoa be dia be ny tsara ny zavamaniry sy ny maro tsy mba toy izany ny fitaovana ampiasainao mba hitombo azy ireo. Trowels, milina fiavana karazany, angady, sy ny sotron'afo haka be dia be ny herisetra mandritra ny vanim-potoana tsy mitsaha-mitombo, ary raha maka fotoana kely ho tia azy ireo, dia Ho tsara kokoa sy maharitra miasa intsony ho anao.
Alohan'ny miresaka momba ny zaridaina fitaovana efa manana, tsarovy, rehefa mividy fitaovana vaovao Gardening mandany bebe kokoa ho any amin'ny avo-tsara fitaovana hamonjy anao alahelo sy ny vola izany any aoriana any. Aloavy kely fanampiny ho fitaovana izay haharitra, fa tsy mora fitaovana izay rovitra ka mila soloina matetika. Ary avy eo dia hampiasa izany araka ny tokony ho! Toy ny hoe mandeha, raha ianareo rehetra manana dia tantanana, mijery ny zava-drehetra toy ny fantsika, nefa mampiasa fitaovana noho ny zavatra tsy natao izany fa hanao dia haingana fomba hanimba na handrava azy io (ary na dia handratra ny tenanao ao amin'ny dingana) . Ny lava-ampiasaina angady dia tsy fitaovana izy, ny indray ny famaky vy dia tsy tantanana, ary ny tanana dia tsy pruner natao nahita alalan'ny iray mirefy sampana. Raha toa ka mila manao zavatra ny amin'izao fotoana izao ny fitaovana stash dia tsy niakatra ho any, dia diniho tsara ny mividy zavatra, mindrana avy amin'ny namana, na ny fanofana ny iray mandritra ny ora vitsivitsy (tsara vahaolana ho fitaovana manokana dia tsy mila matetika).
Raha vao manana napetraka ny tsara Gardening Tools, ireto misy fomba 6 mora foana azy ireo, manomboka amin'ny fitehirizana!
Store soa aman-tsara
Ny fitaovana dia nalatsany ny namana tsara indrindra, satria taorian'ny fanodikodinana, ny laharana voalohany fahavalo ny fitaovana dia hatsiaka ny singa. Naka fanahy tahaka ny mety ho ny hamela ny fitaovana izay azy ireo dia mila rahampitso (na amin'ny herinandro ambony), don`t manao izany! Store rehetra ny fitaovana ao amin'ny nalatsak'i, garazy, na ny weatherproof fitaovana fitehirizana sampana avy tao amin'ny saha (ambanivohitra mailbox manao lehibe weatherproof stash solon'ny tanana fitaovana), ka dia haharitra imbetsaka ela kokoa noho ny fitaovana izay mandany fotoana eo amin'ny masoandro, orana, ary ny rivotra (na hatao nafenina ao amin'ny bozaka lava, ary avy eo hahazo mananika mihoatra).
Ivelan'ny trano fitehirizana no ratsy indrindra ho an'ny hazo famohana, izay afaka roughen, crack, mivaky, tenany, ary ny rot rehefa mandeha ny fotoana. Ny tena tsara toerana fitehirizana fitaovana-miaro ny fitaovana avy amin'ny toetr'andro, fa mamela ny rivotra hivezivezy, dia fitaovana afaka maina sy harafesina sy maty fotsy no tsy dia mety hitranga.
Hiambina azy Clean
Tany mihazona hamandoana sy mampirisika harafesina, izay namonoany ny fitaovana hiala madio dia hanampy azy ireo haharitra intsony. Izany ihany koa ny fomba tsara mba tsy potika ny ahi-dratsy sy ny voa na ny fakany tany afindran'ny aretina tsy ho nafindra ny toerana. Alohan'ny mametraka ny fitaovana hiala, sasao eny na tany, na hofafako hiala izany eny amin'ny putty antsy (foana ny iray isaky ny faritra fitehirizana fitaovana). Mampiasà famafan- (kely turpentine, raha ilaina) mba hanala zavamaniry Sap sy resins tsy nanapaka fitaovana. Maina ny nanadio fitaovana, indrindra fa misy vy sy hazo faritra, miaraka amin'ny absorbent famafan-.
Fisorohana ny fihanaky ny aretina
Raha toa ianao efa niara-niasa tamin'ny mazava ho azy fa marary fototra fitaovana, nanadio ny manapotsitra ny fitaovana ao amin'ny vahaolana ny tapany nisafo toaka sy ny antsasaky ny rano ho dimy minitra mba hamono eny na mikraoba alohan'ny namaoka ny fitaovana sy mitahiry azy ireo.
Hahatonga azy ireo Sharp
Mpahandro tsara indrindra mahafantatra ny hasarobidin'ny antsy maranitra, nefa firy zaridaina mahatsapa fa fitaovana maranitra manao zaridaina asa haingana kokoa, mora kokoa, ary indraindray aza tsara kokoa ny zavamaniry? Ny fitandremana tsara amoron'ny amin'ny angady na ny tanana pruner Mora ka hamonjy anareo fotoana izany any aoriana any. Aza miandry ny fitaovana dia lalodalovana: Eritrereto Ampitomboy toy ny isan'andro flossing noho ny fitaovana!
Hojerentsika àry aloha izay teo an-tsisin'ny ny lelan-tsabatra. Maro ny fitaovana no fisaka tamin'ny lafiny iray, ary zorony (beveled) eo amin'ny ambadiky; fitaovana hafa dia zorony eo amin'ny andaniny sy ny ankilany. Koa mitandrina ny fiolahana ny "bevel." Moa ve maranitra sy manify toy ny antsy, na fotsiny ny tena sisiny maranitra kokoa amin'ny lafiny tapa-doha? Ny tanjona dia ny fanahafana foana tany am-boalohany.
Ny ankamaroan'ny fitaovana metaly manify handray soa avy amin'ny coating diloilo mba hisorohana ny harafesina, raha tsy ry zareo Stainless vita tamin'ny vy, izay afa-miala amin'izany. Ataovy ny Can ny linseed menaka eo amin'ny fitaovana iray nandatsaka malefaka miaraka amin'ny famafan-, ary manome ny fitaovana haingana nanadio-indray mandeha eo alohan'ny fametrahana azy. Azafady don`t mampiasa menaka maotera eo amin'ny fitaovana! Be dia be ny boky zaridaina mbola fahazoan-dalana mankany izany, kanefa moa ve tena te-ho nametraka moto diloilo ao amin'ny saha tsara tany? Don`t tokoa aho.
Raha hitanao misy harafesina, mampiasa borosy tariby na Emery lamba (karazana toy ny fantsika rakitra glued ny lamba fa tsy baoritra sy ampiasain'ny metalworkers) mba hanesorana izany. Azonao atao koa ny manosotra izany hiala amin'ny mahavoky fasika. Ataovy ny matanjaka siny feno fasika nafangaro menaka eo amin'ny nalatsany, ka mandentika ny nanadio fotsiny fitaovana ao an-fasika fotoana vitsivitsy. Izany matetika rehetra fa mitaky ny poloney na ny fitaovana ary ny diloilo tamin'izany andro izany.
Toe-javatra The Wooden famohana
Tsindraindray mampihatra ny manify coating ny linseed diloilo mba ho maina, hazo unpainted famohana sy Buff eny na mihoatra amin'ny famafan- madio ny andro manaraka. A ratsy weathered tahony dia manapotsitra ny tena kely feno diloilo, ka hametraka ny manify coating isan'andro mandra-misy menaka kely sisa eny ambonin'ny andro manaraka. Raha toa ka tsy mahita linseed menaka tao amin'ny fivarotana fitaovana eo an-toerana, ny loha tsy mahazo manao an-toerana fivarotana sakafo ara-boajanahary. Flaxseed diloilo izay ianao no mahandro sakafo amin'ny zavatra mitovy tamin'izany linseed oil- "lin" toy ny ao amin'ny "lamba rongony," ny kofehy vita amin'ny rongony. Izany no fomba tsara ihany koa ny mampiasa ny antitra izay flaxseed menaka amin'ny dakozia izay lasa ho eny tsiro.